Cash Zvinyorwa - CashCounterMachines.com
musha Cash Rejista
Iyo XE-A207 regisheni yemari ine yakasarudzika menyu-based control system ndiyo yakanakira mhinduro kumabhizinesi anoda zvichangobva kuitika pamwe nef...
#1 Akanakisisa Mutengesi MuCash Rejista Zvinamirwa:Bhuku reMushandisi muChirunguMushandisi Chinyorwa muSpanishPC Link Manual muChirungu -The XE-A407 regisita yemari is ...
Thermal Receipt Pepa Rinokunguruka 3 1/8' (80mm) x 220', Bhokisi re50
-Isai aya 3.125-inch x 220-foot thermal paper rolls zviri nyore mumareji emari uye maprinta emarisiti. -Dhinda zvakajeka, zviri nyore kuverenga rece...
Thermal Receipt Paper Rolls 2 1/4' (58mm) 10T3202x 230', Bhokisi re50
-Iisa izvi 2.25-inch x 230-tsoka anodziya mapepa anotenderera nyore nyore mumari marejista uye madhiri ekugashira maresitoreta. -Prinda zvakajeka, zviri nyore kuverenga recei...
Thermal Receipt Pepa Rinokunguruka 2 1/4' (58mm) x 80', Bhokisi re50
-Isai aya 2.25-inch x 80-tsoka anodziya mapepa anotenderera zviri nyore mumarejista emari uye madhiri ekugashira maturu. -Prinda zvakajeka, zviri nyore kuverenga risiti...
Thermal Receipt Pepa Rinokunguruka 2 1/4' (58mm) x 60', Bhokisi re50
-Isai aya 2.25-inch x 60-tsoka anodziya mapepa anotenderera zviri nyore mumarejista emari uye madhiri ekugashira maturu. -Prinda zvakajeka, zviri nyore kuverenga risiti...
Thermal Receipt Pepa Rinokunguruka 2 1/4' (58mm) x 50', Bhokisi re50
-Isai aya 2.25-inch x 50-tsoka anodziya mapepa anotenderera zviri nyore mumarejista emari uye madhiri ekugashira maturu. -Prinda zvakajeka, zviri nyore kuverenga risiti...